နှဈသဈမှာ ကံဇာတာတှပှေငျ့လနျးစဖေို့ နနေံ့အလိုကျ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာ ပွုလုပျနညျး - Tameelay
နှဈသဈမှာ ကံဇာတာတှပှေငျ့လနျးစဖေို့ နနေံ့အလိုကျ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာ ပွုလုပျနညျး
နှဈသဈမှာ ကံဇာတာတှပှေငျ့လနျးစဖေို့ နနေံ့အလိုကျ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာ ပွုလုပျနညျး
ကောငျးကြိုးဝဖွော ခေါငျးဆေးယတွာ….ဘုနျးကံပှငျ့ပွီး တဈနှဈတာလုံးကံဇာတာ ပှငျ့လနျးစရေနျပွုလုပျပါလေ….
ပုပ်ပါးစောရဟနျးမငျးကို အကွောငျးပွု ရေးထိုးသော မွနျမာသက်ကရျ (၁၃၈၂)ခုနှဈ နှဈဆနျးတဈရကျနေ့17.4.2020 ရကျနေ့ သောကွာနအေ့တှကျ…..
ရှေးက မွနျမာဘုရငျမငျးမွတျတို့သညျ အရေးအကွောငျး ကွီးငယျ ရှိသောအခါတို့၌ခေါငျးဆေးမင်ျင်္ဂလာ ယတွာဟူ၍ ဆောငျရှကျလရှေိ့ကွလေ၏။မွို့တညျ၊နနျးတညျသောအခါမြား၊စဈထှကျသောအခါမြား၌ အထူးသဖွငျ့ဆောငျရှကျ လရှေိ့ကွ၏။ဇာတာသနျ့သညျဟုလညျးချေါ၏။
ဘုရငျမငျးမွတျမြားသာမက တိုငျးသူပွညျသားမြား သညျလညျး အဆိုပါ ခေါငျးဆေး မင်ျဂလာ ယတွာ ကိုဆောငျရှကျလေ့ ရှိကွ၏။မွနျမာနှဈဆနျး တဈရကျနမြေ့ားတှငျ တဈနှဈတာလုံးအတှကျ ကံအညံ့မြား အခိုကျမြား
ကငျးစငျပွပြေောကျကာကကျြသရမေင်ျဂလာ အောငျခွငျးအဖွာဖွာ တိုးပှားစခွေငျးငှါ ခေါငျးဆေးယတွာ ကို ဆောငျရှကျလရှေိ့ကွ၏။
ရာထူးတကျရနျ၊ရနျအပွိုငျအဆိုငျမြားနေ၍ အောငျနိုငျလိုသောအခါ လာဘျလာဘမြားပိတျနသေောအခါ ဒုက်ခအခကျအခဲ အဆငျမပွမေူ့မြား တဈခုပွီးတဈခု ကွုံနရေသောအခါ စသညျစသညျ တို့၌လညျးခေါငျးဆေးမင်ျင်္ဂလာ ယတွာကို ဆောငျရှကျလရှေိ့ကွ၏။
ထို့ကွောငျ့မိတျဆှေ တို့အလှယျတကူ ပွုလုပျနိုငျရနျ အတိအကအြသေး စိတျဖျောပွပေးလိုကျပါသညျ။
မွနျမာနှဈဆနျးတဈရကျနေ့ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာ ပွုလုပျရနျ
ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာယတွာပွုလုပျရနျ မင်ျဂလာအခါနာရီ၁၃၈၂-ခု ၊ မွနျမာ နှဈဆနျးတဈရကျနေ့ ၊ ၁၇-၄-၂၀၂၀ သောကွာ နေ့….
သောကွာနတှေ့ငျ အတိတျနိမိတျ ကောငျးယူ၍ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာ ပွုလိုကွကုနျသော ခုနှဈရကျ သားသမီး အပေါငျးတို့ အနနှေငျ့ အောကျတှငျ ဖျောပွထားသညျ့ အစီအစဉျအတိုငျး နှဈဆနျးတဈရကျနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ ဆောငျရှကျနိုငျကွပါသညျ။
အခြိနျနာရီ အတိအကြ ဆောငျရှကျ လိုပါသော အောကျပါအတိုငျး ဆောငျရှကျနိုငျပါသညျ။တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားသညျ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ မနကျ (၈) နာရီ (၁) မိနဈမှာ စတငျပါ။
တနင်ျင်္လာသားသမီးမြားသညျ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ နလေ့ညျ (၁) နာရီ (၈) မိနဈမှာ စတငျပါ။အင်ျဂါသားသမီးမြားသညျ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ နံနကျ (၆) နာရီ (၃) မိနဈမှာ စတငျပါ။
ဗုဒ်ဓဟူး-ရာဟုသားသမီးမြားသညျ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ နံကျ (၁၁) နာရီ (၇) မိနဈမှာ စတငျပါ။ကွာသပတေး သားသမီးမြားသညျ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ ညနေ (၄) နာရီ (၅) မိနဈမှာ စတငျပါ။
သောကွာသားသမီးမြားသညျ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ နံကျ (၉) နာရီ (၄၅) မိနဈမှာ စတငျပါ။စနသေားသမီးမြားသညျ နှဈဆနျးတဈရကျနတှေ့ငျ နလေ့ညျ (၂) နာရီ (၇) မိနဈမှာ စတငျပါ။
တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားအတှကျ သောကွာသားသမီးက ကူညီဆောငျရှကျပေးပါ…
တနင်ျင်္ဂနှသေားသမီးမြားသညျ အနောကျအရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့ ၊ ဘယျခွဖွေငျ့ ဆီးညှနျ့(၃)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျသို့ မဟုတျ လငျဗနျးထဲ၌ မမွေို့ (၅)ပှငျ့ ၊ ကံကျော (၂) ညှနျ့ ၊ သပွေ (၆)ညှနျ့ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောတှငျ တငျထားပါ။
တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရေးဆေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာ ထှနျးပစရေနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့ နငျးခဲ့သော ပနျးမြားကို ယူပွီး တောငျအရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါ။
မိမိကမူ လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားကို အနောကျအရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲကာ မွတျဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ (၆)တိုငျ ဖယောငျးတိုငျ (၆) တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးစရေနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
တနင်ျလာ သားသမီးမြားအတှကျ စနသေားသမီးကကူညီ ဆောငျရှကျပေးပါ….
တနင်ျလာသားသမီးမြားသညျ မွောကျအရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ မမွေို့ပနျး(၅)ပှငျ့ ၊ ဘယျခွဖွေငျ့ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျသို့ မဟုတျ လငျဗနျးထဲ၌
နှငျးဆီ (၇)ပှငျ့ ၊ စံပယျ (၃) ကုံး ၊ သပွေ (၆)ညှနျ့ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောတှငျ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရေးဆေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာ ထှနျးပစရေနျ ဆုတောငျးပါ။
ခွဖွေငျ့ နငျးခဲ့သော ပနျးမြားကို ယူပွီး မွောကျအရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားကို အနောကျတောငျ အရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲကာ မွတျဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ (၁၅)တိုငျ ဖယောငျးတိုငျ (၁၅) တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးစရေနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
အင်ျဂါသားသမီးမြားအတှကျ တနင်ျဂနှသေားသမီးက ကူညီဆောငျရှကျပေးပါ…
အဂါင်ျသားသမီးမြားသညျ အနောကျတောငျ အရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ သရကျ (၆) ရှကျ ၊ ဘယျခွဖွေငျ့ မမွေို့(၅)ပှငျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျသိုိ့ မဟုတျ လငျဗနျးထဲ၌ နှငျးဆီ (၇)ပှငျ့ ၊ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့ ၊အုနျးညှနျ့ (၁)ညှနျ့ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောတှငျ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရေးဆေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာ ထှနျးပစရေနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့ နငျးခဲ့သော ပနျးမြားကို ယူပွီး အနောကျမွောကျ အရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားကို အနောကျတောငျအရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါလေ။
ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲကာ မွတျဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ (၆)တိုငျ ဖယောငျးတိုငျ (၆) တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးစရေနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြားအတှကျတနင်ျလာ သားသမီးက ကူညီဆောငျရှကျပေးပါ…
ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားသညျ အရှမွေ့ောကျစူးစူး အရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့- နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့ ဘယျဘကျခွေ- သရကျညှနျ့ (၆)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျသို့ မဟုတျ လငျဗနျးထဲ၌ အုနျး (၁)ညှနျ့ ၊ ကံ့ကျော (၂)ညှနျ့ ၊ မမွေို့(၅)ပှငျ့ ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောတှငျ တငျထားပါ။
တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရေးဆေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာ ထှနျးပစရေနျ ဆုတောငျးပါ။
ခွဖွေငျ့ နငျးခဲ့သော ပနျးမြားကို ယူပွီး အနောကျမွောကျ အရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားကို အရှမွေ့ောကျစူးစူး အရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲကာ မွတျဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ (၁၇)တိုငျ ဖယောငျးတိုငျ (၁၇) တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးစရေနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
ကွာသပတေး သားသမီးမြား အတှကျ အင်ျဂါသားသမီးက ဆောငျရှကျပေးပါ…….
ကွာသပတေး သားသမီးမြားသညျ အရှစေူ့းစူး အရပျသိုိ့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ အုနျးညှနျ့ (၁) ရှကျ ၊ ဘယျခွဖွေငျ့ နှငျးဆီ (၇)ပှငျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျသို့ မဟုတျ လငျဗနျးထဲ၌ ကံကျော(၂)ညှနျ့ ၊သပွေ(၆)ညှနျ့ ၊စံပယျ(၃)ကုံး ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောတှငျ တငျထားပါ။
ခွဖွေငျ့ နငျးခဲ့သော ပနျးမြားကို ယူပွီး အရှမွေ့ောကျ အရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားကို အရှအေ့ရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲကာ မွတျဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ (၁၉)တိုငျ ဖယောငျးတိုငျ (၁၉) တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးစရေနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
သောကွာ သားသမီးမြားသညျ တောငျစူးစူး အရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ ကံကျော (၂)ညှနျ့ ၊ ဘယျခွဖွေငျ့ အုနျးညှနျ့ (၁)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျသို့ မဟုတျ လငျဗနျးထဲ၌ စံပယျ(၃)၊နှငျးဆီ(၇)၊ရှကျလှ(၄) ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောတှငျ တငျထားပါ။
ခွဖွေငျ့ နငျးခဲ့သော ပနျးမြားကို အရှတေ့ောငျ အရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားကို တောငျ အရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲကာ မွတျဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ (၂၁)တိုငျ ဖယောငျးတိုငျ (၂၁) တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးစရေနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
စနသေားသမီးအတှကျ ကွာသပတေးသားသမီးက ကူညီဆောငျရှကျ ပေးပါ….
စနသေားသမီးမြားသညျ တောငျစူးစူး အရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ စံပယျပနျး (၂)ညှနျ့ ၊ ဘယျခွဖွေငျ့ ကံ့ကျောညှနျ့ (၂)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျသို့ မဟုတျ လငျဗနျးထဲ၌ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့ ၊အုနျး(၁)ညှနျ့ ၊ပိတောကျ(၅)ညှနျ့ ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောတှငျ တငျထားပါ။
ခွဖွေငျ့ နငျးခဲ့သော ပနျးမြားကို ယူပွီး မွောကျ အရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျဗနျးထဲမှ ပနျးမြားကို တောငျအရပျသို့ သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲကာ မွတျဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ (၁၀)တိုငျ ဖယောငျးတိုငျ (၁၀) တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးစရေနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
ကြှနျတော့မိတျဆှမြေား နှဈသဈမှာ ကံဇာတာ အညံ့အခိုကျမြား ကငျးစငျပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျး တိုးတကျစရေနျ မိတျဆှအေပေါငျးတို့အတှကျ နှဈသဈကူး လကျဆောငျအဖွဈ ဖျောပွပေးလိုကျရပါသညျ။
နှစ်သစ်မှာ ကံဇာတာတွေပွင့်လန်းစေဖို့ နေ့နံအလိုက် ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုလုပ်နည်း
ကောင်းကျိုးဝေဖြာ ခေါင်းဆေးယတြာ….ဘုန်းကံပွင့်ပြီး တစ်နှစ်တာလုံးကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန်ပြုလုပ်ပါလေ….
ပုပ္ပါးစောရဟန်းမင်းကို အကြောင်းပြု ရေးထိုးသော မြန်မာသက္ကရ် (၁၃၈၂)ခုနှစ် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့17.4.2020 ရက်နေ့ သောကြာနေ့အတွက်…..
ရှေးက မြန်မာဘုရင်မင်းမြတ်တို့သည် အရေးအကြောင်း ကြီးငယ် ရှိသောအခါတို့၌ခေါင်းဆေးမင်္ဂင်္လာ ယတြာဟူ၍ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြလေ၏။မြို့တည်၊နန်းတည်သောအခါများ၊စစ်ထွက်သောအခါများ၌ အထူးသဖြင့်ဆောင်ရွက် လေ့ရှိကြ၏။ဇာတာသန့်သည်ဟုလည်းခေါ်၏။
ဘုရင်မင်းမြတ်များသာမက တိုင်းသူပြည်သားများ သည်လည်း အဆိုပါ ခေါင်းဆေး မင်္ဂလာ ယတြာ ကိုဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြ၏။မြန်မာနှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့များတွင် တစ်နှစ်တာလုံးအတွက် ကံအညံ့များ အခိုက်များ
ကင်းစင်ပြေပျောက်ကာကျက်သရေမင်္ဂလာ အောင်ခြင်းအဖြာဖြာ တိုးပွားစေခြင်းငှါ ခေါင်းဆေးယတြာ ကို ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြ၏။
ရာထူးတက်ရန်၊ရန်အပြိုင်အဆိုင်များနေ၍ အောင်နိုင်လိုသောအခါ လာဘ်လာဘများပိတ်နေသောအခါ ဒုက္ခအခက်အခဲ အဆင်မပြေမူ့များ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြုံနေရသောအခါ စသည်စသည် တို့၌လည်းခေါင်းဆေးမင်္ဂင်္လာ ယတြာကို ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြ၏။
ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေ တို့အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတိအကျအသေး စိတ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုလုပ်ရန်
ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာယတြာပြုလုပ်ရန် မင်္ဂလာအခါနာရီ၁၃၈၂-ခု ၊ မြန်မာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ၊ ၁၇-၄-၂၀၂၀ သောကြာ နေ့….
သောကြာနေ့တွင် အတိတ်နိမိတ် ကောင်းယူ၍ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ပြုလိုကြကုန်သော ခုနှစ်ရက် သားသမီး အပေါင်းတို့ အနေနှင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။
အချိန်နာရီ အတိအကျ ဆောင်ရွက် လိုပါသော အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် မနက် (၈) နာရီ (၁) မိနစ်မှာ စတင်ပါ။
တနင်္လင်္ာသားသမီးများသည် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် နေ့လည် (၁) နာရီ (၈) မိနစ်မှာ စတင်ပါ။အင်္ဂါသားသမီးများသည် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် နံနက် (၆) နာရီ (၃) မိနစ်မှာ စတင်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူး-ရာဟုသားသမီးများသည် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် နံက် (၁၁) နာရီ (၇) မိနစ်မှာ စတင်ပါ။ကြာသပတေး သားသမီးများသည် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် ညနေ (၄) နာရီ (၅) မိနစ်မှာ စတင်ပါ။
သောကြာသားသမီးများသည် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် နံက် (၉) နာရီ (၄၅) မိနစ်မှာ စတင်ပါ။စနေသားသမီးများသည် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့တွင် နေ့လည် (၂) နာရီ (၇) မိနစ်မှာ စတင်ပါ။
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် သောကြာသားသမီးက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ…
တနင်္ဂင်္နွေသားသမီးများသည် အနောက်အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် ရွက်လှ(၄)ညွန့် ၊ ဘယ်ခြေဖြင့် ဆီးညွန့်(၃)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်သို့ မဟုတ် လင်ဗန်းထဲ၌ မေမြို့ (၅)ပွင့် ၊ ကံကော် (၂) ညွန့် ၊ သပြေ (၆)ညွန့်ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာတွင် တင်ထားပါ။
တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေးဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာ ထွန်းပစေရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့် နင်းခဲ့သော ပန်းများကို ယူပြီး တောင်အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါ။
မိမိကမူ လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများကို အနောက်အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ မြတ်ဘုရားတွင် အမွှေးတိုင် (၆)တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၆) တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
တနင်္လာ သားသမီးများအတွက် စနေသားသမီးကကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါ….
တနင်္လာသားသမီးများသည် မြောက်အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် မေမြို့ပန်း(၅)ပွင့် ၊ ဘယ်ခြေဖြင့် ရွက်လှ(၄)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်သို့ မဟုတ် လင်ဗန်းထဲ၌
နှင်းဆီ (၇)ပွင့် ၊ စံပယ် (၃) ကုံး ၊ သပြေ (၆)ညွန့်ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာတွင် တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေးဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာ ထွန်းပစေရန် ဆုတောင်းပါ။
ခြေဖြင့် နင်းခဲ့သော ပန်းများကို ယူပြီး မြောက်အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများကို အနောက်တောင် အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ မြတ်ဘုရားတွင် အမွှေးတိုင် (၁၅)တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၁၅) တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တနင်္ဂနွေသားသမီးက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ…
အဂါင်္သားသမီးများသည် အနောက်တောင် အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် သရက် (၆) ရွက် ၊ ဘယ်ခြေဖြင့်် မေမြို့(၅)ပွင့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်သိုိ့ မဟုတ် လင်ဗန်းထဲ၌ နှင်းဆီ (၇)ပွင့် ၊ ရွက်လှ(၄)ညွန့် ၊အုန်းညွန့် (၁)ညွန့်ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာတွင် တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေးဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာ ထွန်းပစေရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့် နင်းခဲ့သော ပန်းများကို ယူပြီး အနောက်မြောက် အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများကို အနောက်တောင်အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါလေ။
ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ မြတ်ဘုရားတွင် အမွှေးတိုင် (၆)တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၆) တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက်တနင်္လာ သားသမီးက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါ…
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် အရှေ့မြောက်စူးစူး အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့်- နှင်းဆီ(၇)ပွင့် ဘယ်ဘက်ခြေ- သရက်ညွန့် (၆)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်သို့ မဟုတ် လင်ဗန်းထဲ၌ အုန်း (၁)ညွန့် ၊ ကံ့ကော် (၂)ညွန့် ၊ မေမြို့(၅)ပွင့် ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာတွင် တင်ထားပါ။
တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေးဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာ ထွန်းပစေရန် ဆုတောင်းပါ။
ခြေဖြင့် နင်းခဲ့သော ပန်းများကို ယူပြီး အနောက်မြောက် အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများကို အရှေ့မြောက်စူးစူး အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ မြတ်ဘုရားတွင် အမွှေးတိုင် (၁၇)တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၁၇) တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
ကြာသပတေး သားသမီးများ အတွက် အင်္ဂါသားသမီးက ဆောင်ရွက်ပေးပါ…….
ကြာသပတေး သားသမီးများသည် အရှေ့စူးစူး အရပ်သိုိ့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် အုန်းညွန့် (၁) ရွက် ၊ ဘယ်ခြေဖြင့် နှင်းဆီ (၇)ပွင့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်သို့ မဟုတ် လင်ဗန်းထဲ၌ ကံကော်(၂)ညွန့် ၊သပြေ(၆)ညွန့် ၊စံပယ်(၃)ကုံး ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာတွင် တင်ထားပါ။
ခြေဖြင့် နင်းခဲ့သော ပန်းများကို ယူပြီး အရှေ့မြောက် အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများကို အရှေ့အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ မြတ်ဘုရားတွင် အမွှေးတိုင် (၁၉)တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၁၉) တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
သောကြာ သားသမီးများသည် တောင်စူးစူး အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် ကံကော် (၂)ညွန့် ၊ ဘယ်ခြေဖြင့် အုန်းညွန့် (၁)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်သို့ မဟုတ် လင်ဗန်းထဲ၌ စံပယ်(၃)၊နှင်းဆီ(၇)၊ရွက်လှ(၄) ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာတွင် တင်ထားပါ။
ခြေဖြင့် နင်းခဲ့သော ပန်းများကို အရှေ့တောင် အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများကို တောင် အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ မြတ်ဘုရားတွင် အမွှေးတိုင် (၂၁)တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၂၁) တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
စနေသားသမီးအတွက် ကြာသပတေးသားသမီးက ကူညီဆောင်ရွက် ပေးပါ….
စနေသားသမီးများသည် တောင်စူးစူး အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် စံပယ်ပန်း (၂)ညွန့် ၊ ဘယ်ခြေဖြင့် ကံ့ကော်ညွန့် (၂)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်သို့ မဟုတ် လင်ဗန်းထဲ၌ ရွက်လှ(၄)ညွန့် ၊အုန်း(၁)ညွန့် ၊ပိတောက်(၅)ညွန့် ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာတွင် တင်ထားပါ။
တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေးဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာ ထွန်းပစေရန် ဆုတောင်းပါ။
ခြေဖြင့် နင်းခဲ့သော ပန်းများကို ယူပြီး မြောက် အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ဗန်းထဲမှ ပန်းများကို တောင်အရပ်သို့ သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲကာ မြတ်ဘုရားတွင် အမွှေးတိုင် (၁၀)တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၁၀) တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းစေရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
ကျွန်တော့မိတ်ဆွေများ နှစ်သစ်မှာ ကံဇာတာ အညံ့အခိုက်များ ကင်းစင်ပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်း တိုးတက်စေရန် မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အတွက် နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင်အဖြစ် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။
Categories facebook ပျေါမှ သိမှတျဖှယျရာမြား Tags 12 Post navigation
`စိတျညဈတယျဆိုတာ သမာဓိမရှိလို့ပါ´ – ဆရာတျော အရှငျဆန်ဒာဓိက